Yintoni uLwesihlanu omnyama: ukuthengisa eRashiya. Kuthetha ntoni ngoLwesihlanu omnyama?
Yintoni "uLwesihlanu onguNtsundu" - ukuthengisa ngokupheleleyo kwiRashiya 2015
Isithethe sokulungiselela ukuthengisa ngokukhulu-mali kwafika eRashiya evela eU.S. emva kokubonga iMelika, ixesha lokuthengisa iKrisimesi liqala. Yintoni "oMnyama ngoLwesihlanu"? Lezi izaphulelo ezingenakunqwenelekayo (50-90%), izipho ezibizayo, ibhonasi kunye nokubonakalisa ukunyaniseka kuninzi kubathengi. "NgoLwesihlanu onguNtsundu" eRashiya yabanjwa kabini (ngo-2013 kunye neminyaka-engama-2014-m), ngeli xesha, abathengi basebenzisa ii-ruble ezigidi ezingama-600.
Ziziphi izaphulelo ezinikezwa kwi "Black Friday"?
Akuyimfuneko ukulinda izaphulelo ezonakalisayo kwiimveli ezithandwayo zeekhompyutheni kunye nezixhobo eziphathekayo. Ngaloo ndlela, izitolo zasekhaya ezisemakhaya ziphantsi kakhulu kunabo baseNtshona. Kuzo "kwi-Black Friday" iimpahla zithengiswa ngexabiso kumaxabiso angama-2-3, kuthi ubukhulu obukhulu bezaphulelo akudluli kwi-30-40%. Maxa wambi amajelo okuthengisa apapasha izibhengezo nge-80-85% yezaphulelo, kodwa ukuhla kwexabiso kumaxesha amaninzi kubangelwa ezinye izizathu: umnqweno wokuthengisa iimodeli ezingasebenzi okanye ukuphuma kwiindawo zokugcina. Kubalulekile ukuqonda ukuba izinga lokumakishwa kwikhompyutheni, ekuthi "ku-Black Friday" ifunyenwe ngama-50% wabathengi, ayivumeli ukwenza izaphulelo ezinkulu ukuya kuma-70-90%. Kodwa izaphulelo ezikhangayo kubathengi ziyafumaneka.
Yintoni ongayithengisa "ngoLwesihlanu oMnyama"?
Kwixesha elidlulileyo, ngo-2014, amaRashiya akhetha ukunika imali ngempahla ebiza-iikhomputha, ii-laptops, izixhobo zokusebenza zasekhaya, i-electronics. Iinqwelo kunye neempahla ezinomdla kubo. Kulo nyaka izitolo ezidumileyo kwi-intanethi ziza kuthatha inxaxheba kwisenzo - yithuba elihle lokuthenga izipho zoNyaka omtsha kunye neKrisimesi, iimpahla ezifudumele kunye nezicathulo zesibhakabhaka ebusika nasekwindla. Izitolo ziza kuzama ukwanelisa iimfuno zabathengi babo, zisebenzisa izitifiketi, izatifikethi ezizodwa, izipho ezongezelelweyo zokupakisha - ukupakishwa komklamo kunye nokuthunyelwa kwamahhala.
Kuya kuthi nini "uMnyama ngoLwesihlanu" ngo-2015, funda apha .
Yintoni "uLwesihlanu oMnyama" kubadayisi?
Isizathu esilungeleyo sokukhulula iimpahla ezivela kwiiqoqo zangaphambili kwaye zivuyiswe kubaxhasi abakhumbula kakuhle izenzo ezinjalo ezingabonakaliyo;
ukunyuka kwabathengi kwenza kube lula ukuthengisa iiyunithi ezininzi zeempahla;
ukuthengisa kukhuthazwa ngamanye amacandelo (ukuthutha, ukubolekisa);
ithuba lokuthengisa iimpahla ezingahambisani, kuba ipesenteji yokubuyela ngalolo suku incinci.
Yintoni "uLwesihlanu omnyama" kubathengi?
akukho mfuneko 'yokulwa' yeempahla;
kukho ithuba lokwenene lokuthenga iimveliso ze-premium-class ukusuka kumaxabiso awaziwayo ngokugcina ngokukhululekileyo kwiindleko zokuthutha kunye nexabiso;
Iintengiso ezininzi kwi-intanethi zinciphisa ikhomishini yomlamli kwaye zenza isaphulelo / zikhuphe iindleko zokuhambisa;
ukuba unqwenela, umthengi angenza umyalelo wokuthengwa kweempahla ngeenkonzo zokuhambisa, ngaphandle kokuba ibhalansi efunekayo ikhona.
Kwaye enye into enhle kakhulu: kwintlanzi ye "Black Friday" idla ngokuthengwa izinto ezininzi ezingadingekile. Abathengisi be-intanethi yezithintelo ezongezelelweyo ekubuyiselweni kweempahla ezithengiweyo ngosuku lokuphuhlisa aziyi kubeka - zingabuyiselwa kwisitore ngaphandle kweengxaki.
Phumla kwiindawo zokuhlala ze-ski ze-Austria
Ukubhiyozela ngoFebruwari 14
Umbutho wezokuzonwabisa zasebusika
Inkukhu yefostile yesikhombiso ngeeshizi ecibilikiweyo
Ungatshintsha njani kwiklasi yeshishini ngaphandle kweentlawulo ezongezelelweyo?
Iingoma zezingane malunga nemfazwe ka-1941-1945 - zibuhlungu kwaye zithinta iinyembezi
AmaRoma omnyaka ka-2009
Kutheni ndifuna ukunika i-vitamin D kwintsana yam?
Amaqanda aqhekezayo ngesiRomania